Google Places> Google Plus Pages (ယခုအတွက်) | MarTech ဘလော့ဂ်
စီးပွားရေးအတွက် Google Places & Google Plus စာမျက်နှာများ (ယခုအတွက်)
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 14, 2011 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2020 ကီဗင် Mullett
ဒီဟာကသင့်ကို set up လုပ်ဖို့အားပေးတဲ့နောက်ထပ် post တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး စီးပွားရေးအတွက် Google Plus စာမျက်နှာ ချက်ချင်းဆိုသလို၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားချက်တွေလည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဝန်ခံရမည်, ငါက Google+ ကိုလွှတ်ပေးရန်မှာငါမျှော်လင့်ခဲ့သည်ကားအဘယ်သို့, ထိုအဆုံးမှ webinar အဘို့အကြှနျုပျ၏ပြင်ဆင်မှုရှိနေသော်လည်း, ငါကလက်တွေ့ကျကျအခြားရွေးချယ်စရာပူဇော်ရမယ် ... ယခု။
ဘာကြောင့်ငုပ်တာလဲ ဂူဂဲလ် + စာမျက်နှာများသည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်နေဆဲကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုသင့်သော်လည်းအဓိကနေရာများစွာတွင်သူတို့အတိုချုံးလိုက်ကြသည်။ ဒီမှာအနည်းငယ်။
အဲဒီမှာမပေါ်လာဘူး မည်သည့်ကာကွယ်မှုမဆို တစ်စုံတစ် ဦး အားသင်၏စီးပွားရေးနာမည်ဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုမဖန်တီးရန်တားဆီးထားသည်။
သာ တစ်မျက်နှာလျှင်တစ် admin ခွင့်ပြုချက်အရ၊ ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်နေရာချထားခြင်းမရှိသေးပါ။ တစ်နည်းပြောရရင်ကျွန်တော် Cirrus ABS မှထွက်ခွာလျှင် Cirrus ABS ၏အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ဒါဟာ TOS ကိုဆန့်ကျင်သည် အကောင့်အတုတွေဖန်တီးပါနည်းပညာပိုင်းအရပြောရရင်လူတစ်ယောက်ဟာ Google+ အကောင့်ကိုဖွင့်သင့်တယ်။ ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်သည်အမြဲတမ်းလူမှုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲသူမဟုတ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ (ပြီးခဲ့သည့်အချက်ကိုကြည့်ပါ)
ဂူဂယ်လ် + စာမျက်နှာများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များ (SERPs) တွင်ပြသနေသည် ကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောရှာဖွေမှုများအတွက် (သေး) ။
အဆိုပါ အသိပေးချက်စနစ် ရယ်စရာပဲ သင်အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာဖွင့်မဟုတ်လျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏စာမျက်နှာနှင့်စေ့စပ်ကြောင်းတစ် ဦး မြင်နိုင်အသိပေးစာမရှိပါ ဂူဂဲလ် + သည်အီးမေးလ်အသိပေးချက်များကိုပင်ပေးပို့ခြင်းမရှိပါ။ Google Bar အနီရောင်သေတ္တာသည် admin ၏ကိုယ်ပိုင်အသိပေးချက်များကိုသာပြသသည်။
အမှတ်တံဆိပ်ဝိုင်း သင်စီမံခန့်ခွဲသောအမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာနှင့်သင်၏ဂူဂဲလ် + ဂူဂဲလ်အကောင့်နှစ်ခုလုံးတွင်စဉ်းစားစရာများစွာလိုအပ်သည်။
အလားတူပင် သငျသညျ admin ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဝိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်လိုအပ်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာအားမည်ကဲ့သို့ ဦး ဆုံးဝိုင်းမည်ကိုမသိမှီတိုင်အောင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာမှသင်၏ကိုယ်ပိုင် Google+ အကောင့်ကိုဝိုင်း။ မရပါ။ ရှုပ်ထွေးသေးလား
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာ nav တွင် Games menu တစ်ခုရှိသည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်မေးနိုင်သည်။ သို့သော်ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၎င်းသည် Google+ Page ကိုဖန်တီးခြင်း၏တန်ဖိုးကိုအနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် Nav အားအသုံးပြုသူအားအဆင်ပြေစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အချက်မှာပိုမိုမြင့်မားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတန်ဖိုးများဆိုင်ရာအခြားလုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်ဟုဆိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့က Google ကိုဒီထက်ပိုပြီးခွင့်ပြုသင့်သည်။
ဂူဂဲလ် + စာမျက်နှာများနှင့်သူတို့မပတ်သက်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ဂူဂဲလ်နေရာများကိုအရင်ဆုံးသေချာအောင်လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ ဂူးဂဲလ် + သည်အသစ်၊ တောက်ပပြီးဖောက်သည်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော် Google Place စာမျက်နှာနှင့်စနစ်တကျကောင်းမွန်သော optimized ဂူဂဲလ်စာမျက်နှာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများမှာကြာမြင့်စွာရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သင်တစ်ခါမှမတောင်းဆိုဖူးဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သင်က Google Place စာမျက်နှာကိုလန်းဆန်းစေချင်တယ်ဆိုရင်၊ နေရာများ google.
သင်၏ဂူဂဲလ်နေရာသည်အပြင်ထွက်ပြီးပြီလား။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့် Yelp နှင့် Bing ကဲ့သို့သောအခြားတည်နေရာများပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်လိမ့်မည်။ Siri မှာ iPhone 4s အသစ်မှာ Yelp ကိုသုံးတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ Bing တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းရှာဖွေမှုသီးသန့်အများအပြားရှိသည်။ Yahoo ရှာဖွေမှုရလဒ်များသည် Bing မှရရှိသောကြောင့် BingHoo ရှာဖွေမှုသည် ၃၀% ခန့်ရှိသည်။ လွယ်ကူစေရန်ဤဒေသတွင်းစာရင်းများအားလုံးကိုရယူပါ getListed.org.
Tags: ဂူဂဲလ်နေရာgoogle ပေါင်းgoogle plus စာမျက်နှာ+ googleseoလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်
ကီဗင်သည်သက်သေပြထားသော web developer၊ အင်တာနက်စျေးကွက်၊ စပီကာ၊ guest ည့်ဘလော့ဂ်ဂါနှင့် ၁၃ နှစ်ကျော် web အတွေ့အကြုံနှင့်ထူးခြားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ် ၃၀၀ နှင့်အတူသူ၏ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်ဆုရဒီဇိုင်နာဖြစ်သည်။ Kevin သည် Cirrus ABS ဖောက်သည်များအားအွန်လိုင်းအောင်မြင်စေရန်ကူညီရန်လူမှုမီဒီယာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အသုံး ၀ င်မှုစသည်တို့နှင့်အတူသူ၏ ၁၅ နှစ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုသည်။
ဘယ်လို Google Adwords Adrank အလုပ်လုပ်သလဲ?
14:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 44
ဂရိတ် post! ရယ်စရာကောင်းသည်မှာယနေ့ခေတ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်“ Google Analytics” စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်ပြီးဂူးဂဲလ်၏အမှတ်တံဆိပ်ပင်တပ်ထားကြောင်းသတိပြုမိသည်။ တစ် ဦး ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်; သို့သော်တစ်စုံတစ် ဦး က Google ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုရိုးရှင်းစွာပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြောင်း အရမ်းရယ်စရာ! ထို့အပြင် Google သည်၎င်း feature နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထွက်ခွာသွားသောအခါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများကိုကြို။ မတင်သောစကားသည်စကားမပြောနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
14:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 58
၎င်းတို့သည် Places များကို G + အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာများသို့မည်သို့ချိတ်ဆက်မိသည်ကိုမေ့သွားသည်။ get Love getlisted.org (သင့်ထံမှယခင်အကြံပြုချက်ကြောင့်)
14:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 8, 59
ငါခရစ်တစ်နေရာရာမှာရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ငါသည်အချည်းနှီးသော URLs များ, 5000 / အမှတ်တံဆိပ်စက်ဝိုင်းကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အခြားသူတစ် ဦး ၏ host ၏ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါ။
မတ်လ 24, 2012 မှာ 12: 12 pm တွင်
ru 5000 XNUMX ppl အကြောင်းကိုသေချာ?! ငါသာဖေ့စ်ဘွတ်ကန့်သတ်ထားရှိသည်ထင်! သေချာပါတယ်
14:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 00
ငါ့အကြံအစည်အတိအကျ, ကီဗင်! ကျွန်ုပ်အတွက် G + အမှတ်တံဆိပ်စာမျက်နှာကိုပြင်ဆင်ရတာဟာပျော်စရာကောင်းပါတယ် Woodclinched ဘလော့ဂ်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆို G + စာမျက်နှာကိုအဆိုပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်အားသူတို့၏ beta ထုတ်ကုန်အချို့ကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်ကိုအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် SM ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပါ ၀ င်သူမည်သူမဆိုအတွက်အနည်းငယ်သာ beta တစ်ခုဖြစ်သည်။
14:2011 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 8, 06
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ post အတွက်ကီဗင်! မင်းမရှိရင်ငါပလက်ဖောင်းကိုဘယ်တော့မှလိုက်မမီနိုင်ဘူး။